HomeWararka CiyaarahaLiverpool oo wax ka badashey qorshaheeda Saxiixa ee Denis Zakaria
January 23, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in ayna qorshaynaynin in ay u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga kooxda Borussia Monchengladbach ee Denis Zakaria inkasta oo dhawaanahan la isla dhex marayay suuqa kala iibsiga inuu ka tagayo kooxdiisa.
25-sano jirkaan ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Jarmalka wuxuu dhacayaa dhamaadka bisha June, waxaana jiray soo jeedin ah inuu ku bixi karo qiimo dhimis ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ee Janaayo.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa lagu sheegay in Liverpool ay ka mid tahay kooxaha ugu cad cad ee u tartamaya xiddiga heerka caalami ee dalka Switzerland, iyadoo Reds ay ka horreyso Manchester United tartanka loogu jiro saxiixiisa.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Liverpool Echo , kooxda Jurgen Klopp ayaan wax xiiso ah u qabin in Swiss-ku keeno Anfield ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga jiilaalka.
Zakaria – oo sidoo kale lala xiriirinayo Bayern Munich iyo Borussia Dortmund – ayaa dhaliyay labo gool waxaana loo diiwaan geliyay hal caawin 18 kulan oo uu u saftay xilli ciyaareedka 2021-22.